Maqaallada Meghan Bazaman on Martech Zone |
Maqaallada by Meghan Bazaman
Meghan Bazaman waa falanqeeye sare GetApp, wadaaga fikradaha ku saabsan tignoolajiyada suuq-geynta iyo software soo baxaya. Waxay wax ku baratay Xayeysiinta ee Jaamacadda Texas ee Austin waxayna khibrad u leedahay tebinta tignoolajiyada, warbaahinta, daryeelka caafimaadka iyo ganacsiga elektaroonigga ah tan iyo 2011. Ka hor intaysan ku biirin GetApp, Meghan wuxuu maareeyay daraasaadka cilmi-baarista suuq-geynta ee isku-dhafka ah wuxuuna u horseeday dadaallada suuq-geynta nuxurka xogta hormuudka ah, fikradaha iyo shirkadda la-talinta. Waxay khibrad gaar ah u leedahay samaynta cilmi-baadhista sahanka, abuurista xog-ururin, iyo soo bandhigida fikradaha muhiimka ah ee daneeyayaasha.
Xog weyn, Mas'uuliyad weyn: Sidee SMB-yadu u wanaajin karaan Dhaqanka Suuqgeynta hufan
Jimco, Febraayo 4, 2022 Jimco, Febraayo 4, 2022 Meghan Bazaman
Xogta macaamiishu waxay lama huraan u tahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah (SMBs) si ay si wanaagsan u fahmaan baahiyaha macaamiisha iyo sida ay ula falgalaan astaanta. Adduunyada tartanka aadka u sarreeya, ganacsiyadu waxay u istaagi karaan inay ka faa'iidaystaan ​​xogta si ay u abuuraan khibrado badan oo saamayn leh, oo la gaaryeelay macaamiishooda. Aasaaska istaraatiijiyadda xogta macaamiisha ee waxtarka leh waa kalsoonida macaamiisha. Iyo rajada sii kordheysa ee suuqgeyn hufan oo ka imanaya macaamiisha iyo maamulayaasha, ma jirto wakhti ka wanaagsan oo lagu eego